WUXUU U JAWAABAY MUSTAFE SHIINE SIFIHII AAN KU BARTAY! | Gaaroodinet
WUXUU U JAWAABAY MUSTAFE SHIINE SIFIHII AAN KU BARTAY!
September 9, 2017 - Written by Admin
Intii aan qofnimadiisa ka bartay toban sanno ku dhowaad aanu soo wada shaqeynay Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) oo ah Badhasaabka gobolka Awdal oo Isniintii shalay uu madaxweyne ku-xigeenka ahna, ku-simaha madaxweynaha Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) uu shaqadii ka joojiyey.
Mustafe Shiine, waxa uu wargeysyada Dawan oo hore loo odhan jiray MAANDEEQ, uu ka soo noqday Weriye, Tififtire iyo Guddoomiye. Waxaan se is baranay muddadii uu joogay xafiiska maanta aan joogo ee Tifaftiraha wargeyska Dawan (EX- Maandeeq), waxaannu xilligaasi hormuud u ahaa masuuliyiintii iyo suxufiyiintii shaqada igu soo dhaweeyey. Dhowr sannado kadibna wuxuu noqday Guddoomiyihii wargeyskii Maandeeq oo uu dhawr sannadood oo kale noo ahaa madax.
Waxaan ka soo hoos shaqeeyey laba jeer isagoo tifaftire ah iyo markii dambe oo uu u dallacay Guddoomiyaha saddexda wargeys ee dawladda, ka dib markii uu geeriyooday Guddoomiyihii ka horreeyay Ilaahay ha u naxariistee Marxuum- Muuse Aadan Yuusuf.
Mustafe Shiine, wakhtigaas aanu wada shaqayney wuxuu ahaa qof af gaaban oo dadku ka nabadgalaan af iyo addinba. Waxa uu ahaa qof degan oo kooxda la shaqeynaysayna si dhow uga talo qaata oo dulqaad leh.
Waxaan ku aqaanay marka uu gar ku taagan yahay, mid doodiisa ku adag, marka laga gar leeyahayna ka garaaba. Waxa kaloo uu ahaa masuul aan sinaba ugu dul-qaadan in qof shaqaalihiisa ka mid ah madaxda ka sii sareysaa ay u gacan dhaafto. Wuxuu warbixinno togan ka bixin jiray shaqaalihiisa kuwa dedaalka badan, sidaas si la mid ahna waxaa uu isku hawli jiray inuu dhiirrigeliyo inta gaabinaysa. Waxa iyana uu nagala tashan jiray qaabka shaqada isagoo karayey inuu go’aamo u gaar ah qaato.
Haddaba, waxa qoraalkan igu dhaliyey galabta oo aan akhriyey qoraal kooban oo Mustafe Shiine bartiisa facebook-ga ku baahiyey oo uu kaga dareenceliyey talaabada madaxweyne ku-xigeenku shaqadii kaga joojiyey.
jawaabtiisa waxaa ka muuqday taxadar badan iyo asluub oo ka mid ah sifooyinkii aan ku bartay shakhsiyada Shiine. Waxaanu mowqifkiisu waxba kama jiraan ka dhigay telefoonno xalay dadka qaar ii soo sheegayeen in uu gaashaanka ku dhuftay amarka ku simaha madaxweynaha.
Mustafe Shiine, waxa uu sheegay inuu ku-simaha madaxweynaha uga dambeynayo waajibka uu gutay, waxaannu qoraalkiisa jawaab celinta ahaa ku yidhi; “Ku-simaha madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqada iga hakiyo ilaa iyo inta uu dalka dib ugu soo noqonayo Madaxweynihii i igmaday, waanan ku ixtiraamayaa waajibka uu gutay oo aan uga danbeynayaa. Waxaa hadda shaqadii halkeedii ka sii wada Guddoomiyexigeenkaygii oo uu sidaa soo faray Kusimaha madaxweynuhu, isla markaana uu dhigayo sharciga dalka u yaalaa.”